Junior Accountant | MJL & AKT Petroleum Co., Ltd. ﻿
5.8.2018, Full time , Distribution / Logistic
•	LCCI Level III (UK Diploma)
•	Age between (25 to 35)
•	3 to5years experiences in relevant field
Job Function: Junior Accountant
Job posted: 5/8/2018
•	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး(GreatPersonality)၊Communication Skill and Negotiation Skill ကောင်းမွန် ရမည်။လူအများ နှင့်စကားပြောဆိုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်ပြီးစိတ်ရှည်သည်းခံနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ တာဝန်ခံ/ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ...
•	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး(Great Personality)၊Communication Skill and Negotiation Skill ကောင်းမွန် ရမည်။လူအများ နှင့်စကားပြောဆိုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်ပြီးစိတ်ရှည်သည်းခံနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ တာဝန်ခံ/ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ...
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်၍ သွက်လက်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။မည်သည့်နေရာ၊မည်သည့်ဒေသမဆို တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။အချိန်ပိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	Team work ဖြင့်လုပ်နိုင်သဖြစ်ရမည်။
•	စကားပြောပြေပြစ်၍ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ရမည်။
•	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေပြီး/အသောက်အစား/လောင်းကစားကင်းရှင်းရမည်။ •	ခံယူချက်စိတ်ဓါတ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။နာခံလွယ်ရမည်။သင်ယူချင်စိတ်ရှိရမည်။ •	လိုအပ်ပါကခရီးဝေးမောင်းနိုင်ရမည်။
•	အသောက်အစားကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ •	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။
•	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ •	စိတ်ရှည်ပြီး၊စာရင်းဇယားအပေါ်စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။
•	Searching for new clients who might benefit from company products or services and maximising client potential in designated regions. •	Developing long-term relationships with clients, through managing and interpreting their requirements. •	Persuading clients thataproduct or service best satisfies their needs in terms of quality, price and delivery. •	Negotiating tender and contract terms and conditions to meet both client and company needs. •	Calculating client quotations and administering client accounts. •	Providing pre-s ...
Junior Accountant Accountancy Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon MJL & AKT Petroleum Co., Ltd Accountancy Jobs Accountancy Jobs Junior Accountant Jobs in Myanmar, jobs in Yangon